Myanmar Dictionary for all Myanmar ethnic languages | Pyidaungsu Dictionary / မြန်မာနက် ® Myanmar Net
Pyidaungsu Myanmar Dictionary
ပြည်ထောင်စု မြန်မာ တိုင်းရင်းသားများ အဘိဓာန်
English – Kachin, Kayah, Kayin (Karen), Chin, Myanmar, Mon, Rakhine, Shan Dictionary
ကျေးဇူးတင်လွှာ – မူရင်း အဘိဓာန် ရေးသားသူ၊ ပြုစုသူ၊ ထုတ်လုပ်သူ အားလုံးကို အထူး ကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်။ ခရက်ဒစ် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မရေးထားဖြစ်ပါက ခွင့်လွှတ်ပါရန် ကြိုတင် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ ရေးနိုင်ရန် အချက်အလက်များ ပြန်လည် ရှာဖွေ စုဆောင်းလျက် ရှိပါသည်။
ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် – တိုင်းရင်းသား ဘာသာအားလုံး စုံနိုင်သမျှ စုံအောင် ကြိုးစားလျက် ရှိပါသည်။ ယခု လောလောဆယ်တွင် အောက်ပါ ဘာသာများသာ ရှိပါသေးသည်။ အခြား တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အဘိဓာန်များ ရှိပါက ထည့်သွင်းစေလိုလျှင် ကျွန်တော်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပေးပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
1) မြန်မာ/Myanmar, 2) ကချင်/Kachin/Jingpho, 3) စကောကရင်/Sgaw Kayin, 4) ပိုးကရင်/Pwo Kayin, 5) ချင်း/Chin, 6) ဟားခါးချင်း/Haka Chin, 7) တီးတိန်ချင်း/Tedim Chin, 8) မွန်/Mon, 9) ရှမ်း/Shan, 10) မီဇိုချင်း/Mizo, 11) ရဝမ်/Rawang, 12) အခါ/Akha, 13) ပါဠိ/Pali
Note: This is beta version 0.4
တိုင်းရင်းသား ဘာသာ 13 မျိုး ပါဝင်သည်။
Do you use Ooredoo?
Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please allow us to invite you toabrief survey.s.
အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ — Search
8,129,519 page views so far.
© Copyright 1998-2022 All rights reserved by Myanmar Net Media, မြန်မာနက် ဆော့ဝဲ ကုမ္ပဏီလိမိတက်